Ny mpitsidika Koreana Love Guam ary GVB dia mandray ny mpandeha T'way miaraka amina hira
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Guam » Ny mpitsidika Koreana Love Guam ary GVB dia mandray ny mpandeha T'way miaraka amina hira
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Guam • Vaovao Mafana Korea Atsimo • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Miarahaba ireo mpitsidika Koreana i Guam - voalohany aorian'ny COVID-19
Ny birao mpitsidika Guam (GVB) sy ny manampahefana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena AB Won Pat (GIAA) dia nandray ny sidina voalohany avy any Seoul, Korea Atsimo tamin'ny 2021 alina ny sabotsy alina.
Tonga avy tany Seoul, Korea ny fiaramanidina B737-800, ary nitondra mpandeha 52 nankany amin'ilay nosy.
Ny sidina dia niasa T'way, ny mpitatitra fiaramanidina voalohany nanohy ny serivisy serivisy mahazatra indray mandeha isan-kerinandro nanomboka ny 31 Jolay.
Nandray ireo mpizahatany tonga tamin'ny sidina T'way avy any Seoul ka hatrany Guam ny sabotsy ny mpitarika ny fizahan-tany avy ao amin'ny Bureau Guam Visitors.
Guam dia faritany nosy amerikana any Micronesia, any Pasifika Andrefana. Mampiavaka azy io amoron-dranomasina tropikaly, tanàna Chamorro, ary andry vato latte-taloha. Ny maha-zava-dehibe an'i Guam ny Ady Lehibe Faharoa dia hita ao amin'ny War in the Pacific National Historical Park, izay ahitana ny Asan Beach, toerana ady taloha. Ny lovan'ny mpanjanatany Espaniola dia hita miharihary ao Fort Nuestra Señora de la Soledad, eo an-tampon'ny havoana any Umatac.
T'way Air Co., Ltd., teo aloha Hansung Airlines, dia kaompaniam-piaramanidina Koreana Tatsimo izay miorina ao Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul. Amin'ny taona 2018, izy no mpitatitra entana lafo vidy Koreana fahatelo lehibe indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, nitondra mpandeha an-trano 2.9 tapitrisa ary mpandeha iraisam-pirenena 4.2 tapitrisa.
Betsaka ny kaompaniam-pitanterana nanolo-tena hitarika sidina mivantana avy any Korea mankany Guam mandritra ny volana aogositra. Avy eo hanohy ny serivisy an'habakabaka ny Korean Air amin'ny herinandro manaraka amin'ny 6 Aogositra miaraka amin'ny serivisy an'habakabaka isan-kerinandro. Hanomboka sidina indroa isan-kerinandro koa ny Jin Air manomboka ny 3 aogositra sy 6 aogositra.
“Faly izahay fa manohy ny serivisy any Guam ny mpitaterana Koreana. Ny fanoloran-tenan'izy ireo dia dingana iray hafa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany Guam ary fotoana iray hanehoana ny toe-tsaintsika Håfa Adai, "hoy ny filoha & CEO GVB, Carl TC Gutierrez. "Manohy miasa mafy izahay miaraka amin'ireo mpivarotra sy fizahan-tany fizahan-tany mba hampisehoana ny kolontsainay CHamoru ary hanandratra ny traikefa Destination Guam amin'ny ankapobeny."
Fandaharam-potoanan'ny sidina Korea ho an'ny volana Aogositra:
airline Arrival Time Fahaizan'ny fiaramanidina / seza Flight No. Frequency
lavitra 31 Jolay 2021 (sidina voalohany)
7, 14, 21, 28, 2021 aogositra 11: 40 PM Seza B737-800 / 189 TW301 1x isan-kerinandro
Koreana Air 6, 13, 20, 27, 2021 aogositra 1: 00 AM Seza B777-300ER / 277 KE111 1x isan-kerinandro
Jin Air 3 aogositra 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 2021 2: 45 PM Seza B737-800 / 189 LJ641LJ771 2x isan-kerinandro
The Birao mpitsidika an'i Guam (GVB) koa dia nanomana serivisy fiarahabana tonga amin'ny fandraisana ireo sidina miverina mandritra ny volana. Ireo sidina mitambatra dia antenaina hanomezana toerana 3,754 600 any Guam hatramin'ny faran'ny volana aogositra. Seza maherin'ny XNUMX no efa namidy hatreto.
Miezaka miverina tsimoramora i Guam ho lasa Toeram-pizahan-tany any Amerika Atsinanana Pasifika.